Ingabe i-Pinterest Yakho Yokusebenzisa Iselula? | Martech Zone
Njengakuwebhu, i-imeyili kanye nawo wonke amanye amasu - abathengisi kumele bacabangele iselula njengoba bekhiqiza, bekhombisa futhi babelana ngokuqukethwe kwabo kusayithi labo, imiyalezo nangamanye amapulatifomu. Ipulatifomu eyodwa enobukhona beselula yiPinterest. Uhlelo lokusebenza lweselula lwePinterest lulandwe izikhathi eziyizigidi futhi luyaqhubeka luyisikhulumi esithandwayo sokutholwa. Eqinisweni, izivakashi ezi-3 kwezingu-4 eziya ePinterest zikuselula futhi uhhafu wakho konke ukuhlanganyela emphakathini kuma-iPads uvela ePinterest!
Amabhizinisi asebenzisa ipulatifomu futhi ukuthuthukisa amadivayisi eselula zandisa ukubonakala kwazo. Izivakashi ezintsha zeselula ezithunyelwe yiPinterest kubathengisi zikhuphuke ngama-46%!
Kusukela kukhishwe uhlelo lokusebenza lweselula lwePinterest, ukusetshenziswa kwenethiwekhi yokuxhumana nabantu kumadivayisi eselula kukhuphuke kakhulu uma kuqhathaniswa nenguqulo yewebhu futhi kuyaqhubeka nokukhula. I-Pinterest manje ingomunye wabanikeli abaphezulu be-traffic yama-blogger nemikhiqizo futhi okuningi kwalokhu kungenxa yeselula yePinterest. Ngakho-ke ungawandisa kanjani amathuba okuthi izikhonkwane zakho zabelwane futhi zichofozwe kuhlelo lokusebenza lweselula? Nasi umhlahlandlela wokumaketha ngempumelelo kuselula yePinterest.
I-infographic ihlinzeka ngokufaka kumikhawulo yezinhlamvu, ukulinganiswa kwesithombe, ukusetshenziswa kwefonti, izixhumanisi futhi kukhulunywe kahle ngefayela le- I-Pinterest Mobile Pin It SDK ukufaka Izinkinobho ze-Pin It ezithombeni ezivela kuhlelo lwakho lokusebenza lweselula.
Tags: ama-animated ama-gifsiziphoiOSUkusesha okuqondisiwenokwenza kahle kweselulauhlobo lweselulanokwandisa iselulaphina i-Android sdkphina iosphina iphoneiphine sdkInkinobho yePin-Itimikhawulo yezinhlamvu ze-pinterestizixhumanisi ezichofozekayo ze-pinterestamafonti we-pinterestizilinganiso zesithombe se-pinterestpinterest iselulapinterest i-SDK yeselulapinterest i-urlukuphina kwesikhathi sangempela
Ikusasa le-Utopian Lokuthengisa Isiteshi